Real Madrid Oo Barbaro Ku Bilaabatay La Ligaha Kadib Markii Gurigeeda 1-1 Iskula Dhaafi Waayeen Valencia - jornalizem
Real Madrid Oo Barbaro Ku Bilaabatay La Ligaha Kadib Markii Gurigeeda 1-1 Iskula Dhaafi Waayeen Valencia
Real Madrid ayaa soo gashay garoonka marki ugu horeysey iyadoo daafacanaysa koobka La Ligaha xilli ciyaareedkan hase yeeshee kulankeedii koowaad ayaa ku dhamaaday madaxwareer ay ka qaadeen kadib markii 1-1 ku kala baxeen kooxda Valencia.
Los Blancos ayaa goolka ku daahfurtay ciyaarta oo socotay toban daqiiqo kadib markii kubbada uu labo jeer laga soo celiyey markii saddexaad u dhashay weeraryahanka Madrid ee Higuain.
Hase yeeshee Real Madrid ayaa fursado badan iska qasaarisey balse ciyaarta iyadaa xukumaysay balse waxa ay hal mar wax isbedeleen kadib markii laad xur ah ay tuurteen kooxda Valencia kaasoo madaxa uu gool qurux badan ugu saxiixay Jonas waxaana markii uu goolkan dhalanayay isku dhacay goolhaye Cassilas iyo Pebe taasoo ciyaarta hakisey daqiiqado.
Qeybtii koowaad ayaa lagu kala baxay barbaro 1-1 ah, balse qeybtii labad markii la isku soo noqday ayaanay kooxda Real Madrid iyo Valenciaba aysan wax goolal ah dhalin waxana ay ahayd ciyaarta mid aad u kulul oo labada dhinac weeraro qaadayeen haba u sii badnaato kooxda martida loo ahaa ee Real Madrid.
Barbarahan ayaa waxaa u dhabarjab ku yahay kooxda Mourinho maadaama horyaalka La Ligaha uu yahay mid dhibic walba lagu xisaabtamo, haddii ay caawa kulanka Barcelona la dheeleyso Real Sociadad ay badiso Barca waxa ay ku noqonaysaa Real Madrid in labo dhibic durba laga hormaray lana doonayo in ay ka dabatagto maadaama labada koox ay yihiin kuwa mar walba la tilmaamo inay ugu cad cad yihiin horyaalka La Ligaha.